PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-09 - Bayanda abanamathoyizi abesifazane
Bayanda abanamathoyizi abesifazane
Ilanga langeSonto - 2018-09-09 - Front Page - EZESIMANJE: THANDI ZONDI
ABESIFAZANE baseningizimu Afrika kuvela ukuthi basemsileni ngokwezibalo uma kubhekwa ukweneliseka enkonzweni yasekamelweni.
Ucwaningo olwenziwe yivictoria Milan, okuyikhasi lokufuna omaqondana, lithole ukuthi amadoda avela emazweni anjengodenmark, achitha cishe imizuzu engu-40 ekamelweni eqinisekisa ukuthi abesifazane bayeneliseka.
Nokho okuvela ngawaseningizimu Afrika wukuthi kawachithi ngisho imizuzu ewu-15 ekamelweni. Olunye ucwaningo luthole ukuthi ngokwejwayelekile, izithandani zichitha cishe imizuzu ewu-19 ekamelweni okusho ukuthi amadoda akuleli asakhala ngaphansi futhi ekweneliseni ahlekisana nabo.
Udkt Marlene Wasserman owaziwa ngelikadr Eve, oyiclinical Sexologist, uthi kubalulekile ukwazisa uphathina wakho uma ungenelisekile enkonzweni yasekamelweni.
“Akusiyo into elula ukuyenza ngoba abantu kabakhululeki uma kumele kukhulunywe ngezindaba ezithinta ucansi. Uma kwenzekile kwakhulunywa ngazo, kusuke kubhungwa ngamakhondomu noma ngesimo sezempilo SE-HIV, kugcine lapho. Kasiqeqeshiwe ukukhuluma ngobumnandi,” echaza.
Yize kunzima kanjalo, uthi kubalulekile ukuba kukhulunywe ngezindaba ezithinta ezocansi nophathina wakho ukuze kube khona ukweneliseka.
UKHULE EFISA UKUBA NAMATHOYIZI
Uma ubuka imiphumela yalolu cwaningo, ikuveza ngokusobala ukuthi kungani sikhula isibalo sabesifazane abathenga amathoyizi okuzithokozisa.
Ocwaningweni olwenziwe ngonyaka owedlule, kuvela ukuthi elakuleli lihamba phambili ekuthengweni kwamathoyizi okuzijabulisa, lilandelwa yicanada, inew Zealand kugcine i-australia.
Lokhu kudalwa wukuthi ezikhathini ezedlule ukuba namathoyizi bekuthathwa njengento eyichilo. Kanti manje ofisa ukuthenga amathoyizi usekwazi ngisho ukuwathola
online. Umlingisi osemnkantshubovu, ulillian Dube, usanda kuphumela obala ngamathoyizi okuzijabulisa, lapho ecashunwe khona kwelinye lamaphephabhuku esingisi, ethi: “Ngingumuntu osazithokozisa ngenkonzo yasekamelweni. Nginamathoyizi okuzithokozisa ayisikhombisa. Ngiphila impilo eqondile akukho okufihliwe,” kusho yena. Unonjabulo (akusilona igama lakhe langempela), ungomunye wabesifazane abaseba-ncane (30) ongenayo inkinga ngokusebenzisa amathoyizi okuzijabulisa. Uthi lokhu kaku-sho ukuthi akenelisekile enko-nzweni yasekamelweni, kodwa yinto etshengisa ukukhululeka njengowesifazane.
“Ngikhula ngangivele ngiwumuntu ofisayo ukuba namathoyizi kodwa ngingakaze ngifikelwe wumuzwa wokuya esitolo. Kuthe ngelinye ilanga umngani wami ewadayisa, ngase ngizithengela. Kusukela ngaleso sikhathi kangizange ngisabheka emuva. Ngingumuntu ozikhululekele uma kuza enkonzweni yasekamelweni,” kuchaza yena.
Uthi iphutha eliyaye lenziwe ngabantu ngelokucabanga ukuthi umuntu othenga amathoyizi ngongenaso isinqandamathe. “Ngesikhathi ngithenga elami lokuqala, nganginaye umaqondana, kodwa ngilisebenzisa futhi. Namanje nginaye, ngiwasebenzisa naye noma ngedwa njengoba nginayisihlanu,” echaza.
Uthi siphelile isikhathi sokuvalela ezinye izihloko, kungakhulunywa ngazo, kube sengathi kazisiyona ingxenye yempilo.
“Lesi sihloko sifana nezinye, kakumele sishiywe ngaphandle. Mina ngithenga ngisho izincwadi ukuze ngizifundise kabanzi ngocansi,” kuphetha yena.
Konke lokhu kutshengisa ukukhula nokukhululeka kwabesifazane uma kuyiwa enkonzweni yasekamelweni. Indlela abesifazane abakhuliswa ngayo, ikakhulukazi abamnyama, yenza iningi labo lingakhu
lule- ki ukukhuluma ngokusobala ngesihloko salolu hlobo.
Nokho uyaye uzwe nxa abesifazane bezixoxela bebodwa ukuthi uma kwenzekile bazama ukwenza okuhlukile enkonzweni yasekamelweni, kuba nemibuzo elandelayo yokuthi bakufunda-phi lokhu abakwenzayo.
Kubalulekile ukuba uma kubhekwa inkululeko yenkonzo yasekamelweni, bangashiywa ngaphandle abesifazane noma banikwe amagama alumelayo ngoba nakhu bezama okwehlukile nokungajwayelekile, ikakhulukazi kithina bantu abamnyama. Ukusebenzisa amathoyizi makubukwe njengendlela yokuzithokozisa, hhayi yokuba yisonakali.
1: YI-MAGIC wand ball eyenzelwe owesifazane. 2: Amabhola abesifazane alolonga isitho siqine. 3: Okokudlalisa isitho. 4: Kuseyibhola lokuqinisa isitho.
5: Kuseyilo ibhola. 6: Okokuzimasaja isitho okubukeka sa-lipstick. 7: Amajazi a-flavoured. 8: Izinhlobo ze-vibrator. 9: Okokuzikitaza ingemuva.
10: Okokudlalisa leya ndawo eyenza isitho sikhiqize uketshezi (clitoris massager). 11: Kwenza okufanayo no: 3 kuhluke isakhiwo. 12: Okunamazenge okufakwa emunweni uma usebenziwa wona nebhola lakhona ukuze ukitazeke.
KUBALULEKILE ukuwahlanza bese ebekwa kahle amathoyizi uma usuqedile ukuwasebenzisa. LOLU wuhlobo lwethoyizi ongazitshela ukuthi wumhlobiso thizeni noma yimigexo kanti lutho. OKUQAPHELEKILE wukuthi amathoyizi okuzithokozisa ayizinhlobo eziningi futhi ayimibala ekhangayo. NGUMAMA ulillian Dube ophumele obala ngokuba namathoyizi okuzithokozisa.